Nhanho yakanaka, Rosa Montero's "existential thriller" | Zvazvino Zvinyorwa
Rombo rakanaka raRosa Montero
Rombo rakanaka ndiyo runyorwa rwechangobva kuitika nemunyori ane mukurumbira wechiSpanish Rosa Montero. Yakabudiswa neimba yekutsikisa Alfaguara, muna Nyamavhuvhu 27, 2020. Munyori akataura mubvunzurudzo yemagazini Zenda iyo nyaya iri maererano:
Iyo rondedzero inotaurira kuti mutaundi diki riri kumaodzanyemba kweSpain hupenyu hweva protagonists, Pablo naRaluca, vanopindirana. Vaviri vakapfuura nemumamiriro ezvinhu akaomarara uye chokwadi chavo chakasiyana zvachose, asi neimwe nzira vanozowirirana, nekuti irima uye chiedza. Nebhuku rino, anoverenga anoratidza nezve hupenyu, mufaro uye mhedzisiro yezvakamboitika zvinorwadza.
1 Rombo Rakanaka Pfupiso (2020)
2 Rombo rakanaka kuongorora
2.2 Vakatungamira vaviri
2.3 Vamwe vatambi
3 Pfungwa dzeruzivo
4 Dhairekodhi dhata remunyori
4.1 Professional Zvidzidzo
4.2 Zvekunyora basa
4.3 Zvinyorwa zvemitambo
4.3.1 Novels naRosa Montero
Pfupiso ye Rombo rakanaka (2020)
Pablo Hernando mugadziri Quien anofamba nechitima kumusangano mu kumaodzanyemba kweSpain. Akadzika mupfungwa, anopindura ona chiratidzo "Chekutengesa" chinhambwe, Inoratidzwa muhwindo reimba yekare yakatarisana nemakwara. Pakarepo, sarudza kuenda pasi nechinangwa che tenga akati flat. Panguva iyoyo zvikonzero zvechisarudzo chisingafungidzirwe uye chinokanganisa hazvizivikanwe.
Iyi furati iri muPozonegro, guta rakadzingwa rine vagari vanopfuura chiuru zvishoma. Pakutanga, guta iri rakanakidzwa nebudiriro nekuda kweindasitiri yezvemigodhi, kunyangwe hazvo pakanga pasara peakanaka nguva. Kunyangwe nzvimbo yacho isingaenderane nemararamiro akajairwa naPablo, ipapo anosarudza kupotera, akanyura mukushushikana kwakadzika.
Mbichana mbichana, protagonist ichasangana nevanhu vanonakidza munzvimbo yake. Pakutanga kune varimi vechivakwa chisina hanya, pakati payo pane muvakidzani wayo, Raluca. Uyu mukadzi anonzwisisika anounza shanduko dzinoshamisa kuhupenyu hwemurume iyeye, anozotanga kukoshesa izvo zvinhu zvainge zvisina basa kwaari kare. Iye achave iwo mwenje wandaida pamberi pekusviba kwakadai.
Analysis of Rombo rakanaka
Rombo rakanaka ingano inotsanangurwa nemunyori se: “… a zviripo zvinonakidza pasina umhondi uye uzere nenhema nezvakavanzika ”. Iyo yakaiswa mutaundi rekunyepedzera rinonzi Pozonegro, uye zano rayo rinotsanangurwa ne munyori wezvese anoziva, mune zvishoma kupfuura mapeji mazana matatu. Iri bhuku rakarongeka mu zvitsauko zvipfupi, umo nyaya inoyerera zviri nyore uye zvakajeka.
Iye mugadziri wemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa, akatombonetseka, ndiani inozivikanwa nehunhu hwayo uye zvakavanzikaNekuda kweiyi yakasarudzika hunhu, hushamwari hwake hushoma. Pablo asvika padanho apo anobvunza zvaunotenda kare, zviito, uye sarudzo; izvo zvimwe zvakamukurudzira kutora shanduko yakakura kudaro mukuvapo kwake.
Icho chiri pamusoro mhizha kubva kuPozonegro, nyanzvi mukupenda mifananidzo yemabhiza; ndiye mukadzi ane simba rinopfachukira, nehutsva, hunhu hunhu uye uzere nevanhu. Kunyangwe achitungamira hupenyu hwakanyarara, iye akafukidzwa nechakavanzika cheakavanzika ake ekare, ayo aakavanza chaizvo; pamwe nekuti vazhinji mutaundi vari mumamiriro akafanana.
Vanoverengeka vechipiri vatambi vanofambidzana muchirongwa, icho, sevamiriri, vakavakwa zvakanaka kwazvo. Pakati peizvi Vanoverengeka vavanoshanda navo vaPablo vakatanhamara, saRegina, Lourdes naLola, ndivo vekutanga kunetseka mushure mekushaikwa kwake. Pamusoro pe, shamwari dzake German naMatías, uyo anozivisa mapurisa mushure mekunge asipo pamusangano muMalaga.
Kune rumwe rutivi, ndizvozvo vavakidzani vatsva ve protagonist, vanogara mudhorobha rinoita serakamira munguva uye mune humanyepo. Vanhu ava vanovanza enigmas dzakawanda, zvimwe zvisingakoshi uye pamwe zvinosetsa, asi zvimwe zvakakomba uye zvisina tariro. Zvese zvakakomberedzwa nematambudziko akaomarara, izvo zvisina kusiyana nezvazvino zvazvino.
Munyori akagadzira runyorwa mune misoro yakadai sezviito zvakanaka nezvakaipa zvevanhu zvinokurukurwa. Chii chimwe, inokumbira kuti iite ratidziro yakasimba pamamaki ayo anogona kukonzera kushungurudzika kwehudiki uye nemhedzisiro yakaipa yavanogona kuburitsa.
Zvese izvi kubva pane yakanaka maonero, kugara uchibhejera kubudirira kwezvakanaka pane zvakaipa. Chinja maonero ako, uye uone hupenyu nemaziso akasiyana, tendeuka peji uye uvimbe nemhanza yakanaka.
Rombo rakanaka yakakwanisa kutora zviuru zvevaverengi; muwebhu, 88% yeaya anoongorora chinyorwa zvakanaka. Yayo inopfuura 2.400 kuongororwa pachikuva inomira Amazon, iine avhareji ye4,1 / 5. 45% yeava vashandisi vakapa bhuku iro nyeredzi shanu uye vakasiya zvavakaona mushure mekuverenga. Chete 13% yakaronga basa iro 3 nyeredzi kana zvishoma.
Munyori akagamuchira akawanda makwikwi neichi chazvino chiverengero, zvese munyika nepasirese. Kunyangwe panguva ino akadurura zvishoma zvemhando yake yakasarudzika, chakavanzika chake chinonakidza uye chine hunyanzvi, pamwe nehunhu hwake hwakashinga uye madingindira, akafadza vateveri vake.
Dhairekodhi dhata remunyori
Mufananidzo © Patricia A. Llaneza
Mutori wenhau uye munyori Rose Montero Iye chizvarwa cheMadrid, akazvarwa neChitatu Ndira 3, 1951, vabereki vake ndiAmalia Gayo naPascual Montero. Kunyangwe ndakararama hudiki munzvimbo yakaderera, akasimuka akatenda nekuda kwehungwaru uye fungidziro. Kubva achiri mudiki kwazvo aifarira kuverenga, humbowo hweizvi ndizvozvo aine makore mashanu chete iye akanyora mitsara yake yekutanga yekurondedzera.
Uye 1969, Akapinda muComplutense University yeMadrid kuti adzidze psychology. Gore rakatevera, akatanga kushanda mumapepanhau akawanda eSpain, kusanganisira: Chimiro y Pueblo. Ichi chiitiko chebasa chakamuita kuti arege kutsvaga kwake basa seyepfungwa, saka akachinja munda wake uye makore mana gare gare akapedza kudzidza semutori wenhau kubva kuMadrid School of Journalism.
Akatanga semunyori wenhau mupepanhau reSpain Nyika, nguva pfupi yapfuura nheyo yayo, mu 1976. Ikoko akaita zvinyorwa zvakawanda, izvo zvakamutendera bata kwemakore maviri (1980 na1981) chinzvimbo chemupepeti-mukuru yeSvondo yekuwedzera yepepanhau.
Mukati menzira yacho yose ane hunyanzvi mukubvunzurudzwa, inzvimbo iyo inomiririra kune yayo yekutanga uye maitiro ayo. Kune mbiri yake hurukuro dzinopfuura zviuru zviviri nenhamba dzinozivikanwa dzinoverengwa, vakadai sa: Julio Cortázar, Indira Gandhi, Richard Nixon, pakati pevamwe. Kune mayunivhesiti mazhinji eSpanish neLatin ayo atora hunyanzvi hwake kubvunzurudza semuenzaniso.
Munyori debuted neinova Makoronike ekushungurudzika kwemoyo (1979). Iri basa rakavhundutsa zvese nzanga uye kunyora kushoropodza nguva yacho, nekuda kwenyaya yayo pamusoro pekuzvimirira kwevakadzi Parizvino ane chikwereti chake 17 nhoroondo, mabhuku mana evana uye mbiri nyaya. Inotaridzika pakati pemagwaro ayo: Mwanasikana wevanodya vanhu (1997), iyo yaakakunda nayo Primavera mubairo wenhau yekuSpain.
Novels naRosa Montero
Nhoroondo yekushungurudzika kwemoyo (1979)
Iyo Delta basa (1981)
Ndichakubata samambokadzi (1983)
Anodiwa tenzi (1988)
Akanaka uye akasviba (1993)
Mwanasikana wevanodya vanhu (1997)
Moyo weTartar (2001)
Mukadzi anopenga wemba (2003)
Nhoroondo yeiyo Transparent King (2005)
Mirayiridzo yekuchengetedza nyika (2008)
Misodzi inonaya (2011)
Pfungwa isina musoro yekusazokuona zvakare (2013)
Kurema kwemoyo (2015)
Munguva dzekuvengana (2018)
Rombo rakanaka (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Rombo rakanaka raRosa Montero
Vicente Nuñez. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Rafael Caunedo. Kubvunzana nemunyori weChishuwo Che tsaona